လွန်ခဲ့တဲ့(၃)နှစ်တုန်းက တွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို ကူညီချင်လို့ အပူတပြင်းလိုက်ရှာနေတဲ့ ယုန်လေး - Cele Gabar
လွန်ခဲ့တဲ့(၃)နှစ်တုန်းက တွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို ကူညီချင်လို့ အပူတပြင်းလိုက်ရှာနေတဲ့ ယုန်လေး
ယုန်လေးကတော့ တေးရေး၊တေးဆို အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကကို စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အောင်မြင်မှုရရှိနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့အပြင် ယုန်လေးကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ လိုအပ်နေသူတွေကို ဖေးမကူညီတတ်သူ၊ ဝါသနာရှင်တွေကိုလက်တွဲခေါ်ယူတတ်သူတစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်တွေလေးစားချစ်ခင်နေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလစတင်ကတည်းက ချို့တဲ့သူတွေကိုဆက်တိုက်ကူညီနေတဲ့အပြင် ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကတည်းက ကူညီချင်ခဲ့တဲ့ မိဘမဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံနဲ့အတူ “ဒီ ကလေးလေး ကိုမှတ်မိကျသေးလား .ဒါမှ မဟုတ် . အခု ဘယ်မှာလဲ သိတဲ့ သူများရှိမလား ခင်ဗျာ .လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ် လောက်ကတွေ့မိတာပါ .အဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်တော်လည်း ဘာမှကူနိုင် ခဲ့ပါဘူး .အခု ဘယ်မှာရှိလဲ သိရင် ပြောပေးပါ .ကျွန်တော်တို့လို ဘဝတူ ညီလေးမို့လို့ပါ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပြီး… စိတ်ဓာတ် ခွန်အားပေးချင်ပါတယ် . အဲ့မိဘမဲ့ ကျောင်းလေးမှာပဲလား မသိဘူး …သိတဲ့ လူများပြောပေးပါနော်” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို အကူညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။
ဒီကလေးလေးကတော့ မိဘကစွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပြီး ယုန်လေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်တုန်းက မကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ သူတတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးချင်လို့ပါတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ…. ယုန်လေးရှာဖွေနေတဲ့ ကလေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိတဲ့သူများရှိရင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Previous post ကိုဗစ်ကာလအတွင်းစားထားသမျှကို ရက်(၃၀)အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ လင်းအောင်ခေတ်
Next post အမြန်လမ်းမှာကားဘီးပေါက်လို့အခက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကကူညီခဲ့တာကြောင့် အဆင်ပြေသွားခဲ့တဲ့ခင်သဇင်